Hadii Jawaari guulaysto, wax ma ka badali karaa tartanka Madaxweynanimo? | Maanta Online
Home / Faallo / Hadii Jawaari guulaysto, wax ma ka badali karaa tartanka Madaxweynanimo?
Posted by: admin in Faallo January 5, 2017	Comments Off on Hadii Jawaari guulaysto, wax ma ka badali karaa tartanka Madaxweynanimo? 936 Views
· Inuu haysto dhaqaale ku filan, madaama ay u baahan tahay madaxweynanimo laysu sharaxo dhaqaalo faro badan.
Previous: Wasiiro, Xildhibaano iyo ururrada bulshada oo Prof. Jawaari ka codsaday inuu isa soo sharaxo + Sawirro
Next: Faarax Cabdulqaadir: “Markii ay hooyadey i dhashay dad badan oo qoyskeyga ka mid ah waxay isweydiiyeen xilliga aan noolaanayo”